Tsy rototra | NewsMada
Par Taratra sur 08/12/2016
Mihen-danja isan-taona ny herijikan’ny Malagasy miatrika ny fetin’ny Krismasy sy ny faran’ny taona. 18 andro sisa tsy higadonan’ny fetin’ny Krismasy kanefa toa tsy rototra amin’izany ny ankamaroan’ny olona tazana eny an-dalambe.
Fahasahiranana sy tsy fahampiana no ambetin-tenin’ny renim-pianakaviana rehefa tafaresaka. Manaporofo ny tsy fahataitairan’ny olona hiatrika fety ny fahanginan’ny tsena hoy ireo mpivarotra.
Zara raha misy mpanontany ny entana. Tsy manam-bola ny olona. Mbola mitady izay harapany anio ny rehetra ka tsy ahoany ny fety fa toy ny andavanandro ihany izany.
Tazanim-potsiny ny akoho amam-borona eny an-tsena.
Rotoroto, fiferotan’aina, fahakiviana no hita misoritra amin’ny endriky ny ankamaroan’ny malagasy tsy mandadiharona. Mitambesatra eo ambony lohany ny fahantrana, trosa, ahiahy, tahotra…
Misy ihany anefa ny vitsy an’isa afaka mifety tsara. Miharihary izany amin’ny famenoana ny kalesy fitondrana entana eny amin’ny tranombarotra vaventy eto Antananarivo. Vadina minisitra sy ireo manan-katao manana fahafahana manatanteraka izany.
Mahavatra mandany vola an-tapitrisany maro ao anatin’ny iray andro hamenoana ny vata mangatsiaka hiatrehana ny fety. Endrika faly sy manana fanantenana fa hipoapoaka ny fety no tazana eny amin’izy ireo.
Ny sasany aza anie mbolah andeha hivoaka hamonjy alim-pandihizana handoavam-bola an’hetsiny amin’ny faran’ny taona e ! Hamonjy ireo hanim-pitoloha tsy lany laniana. Tsy mahatsapa fahasahiranana, tsy manana ahiahy fa miaina finaritra.
Mifanalavitra ny elanelan-tsaranga eo amin’ny Malagasy. Antony miteraka fialonana sy lolom-po izany ary tonga amin’ny tsy fandriampahalemana izay mivaivai ankehitriny.
Na eo aza ireo mpanefoefo vitsivitsy manana fahafahana manao fety, raha hatao indray mijery ny eny andalam-be, tsy taitra tsy rototra ary tsy somebiseby akory ny ankamaroan’ny olona.